Halkii Doollar iyo Kow-iyo-tobankii Senti ee Mucjisada ahaa! – Cabdicasiis Guudcadde
May 9, 2015 July 10, 2016 Guudcadde
Halkii Doollar iyo Kow-iyo-tobankii Senti ee Mucjisada ahaa!
Qoraalka la haltebiyay
Tess waxa ay ahayd siddeed jir aan muddakor ahayn markii ay maqashay Aabbaheed iyo Hooyadeed oo kawada sheekaysanaya xaalka walaalkeed, Andrew. Waxa keli ah ee ay ogtahay waa in uu xanuunsanayo, oo weliba aad loo hayo, iyo in reerkoodu gebi ahaanba shiid yihiin oo aan gini lacag ah lagu ogayn. Waa in ay guri kiro ah oo kuwan. ‘Apartment,’ u guuraan bisha soo socota, waayo Aabbo ma hayo wax lacag ah oo ku wada filnaata kharashaadka dhakhtarka iyo gurigan ay ku jiraan.
Qalliin qarash yar ku kacaya ayaa ku filan in uu walaalkeed badbaadiyo, waxa aanay xaaladdu u eegtahay in aanay jirin cid u diyaar ah in ay caawiso oo ay dayn siiso. Waxa ay maqashay Aabbaheed oo Hooyadeed oo ilmaynaysa ku leh, “Keliyaata wax mucjiso ah ayaa badbaadin kara wiilkeenna.”
Tess waxa ay gashay qolkeedii hurdada waxa aanay soo jiidday koomaddiinka oo ay ugu jirtay jalxad ay shilimaan ku kaydsan jirtay. Waxa ay ku daadisay marmarka dhammaanba qaddaadiicdii ku jirtay jalxadda, waxa ayna u tirisay si taxaddar badani ka muuqdo. Saddex jeer ayaa ay ku noqnoqotay. Wadartiina waa ay xafidday. Khaladaadka aad bay iskaga ilaalinaysay. Si ka-fiirsi cimidh ka yahay ayaa ay qaddaadiicdii ugu celisay halkii hore ay ugu jireen; jalxaddii.
Inta ay si jabaqtirasho ah uga baxday gurigii ayaa ay tagtay farmasii ku dhawaa dabakaayo kasoo horjeedday xaafadda. Waxa ay sugtay kuyuugii iyadoo ay ka muuqatay dulqaad badani. Waa ay u dhawaaqday ninkii haystay farmasiiga balse wuu iska dhega-tiray. Waa ay xiiqday sidii ay marna ugu dhawaaqaysay marna ugu foodhyaysay.
Fekrad ayaa ay keentay, shilin bir ah ayaa ay ka soo saartay jalxaddii waxaanay ku garaacday miiskii oo isna bir ahaa. Tan baa u shaqaysa. Waa taa soo soo jeedisay ruuxii haystay meesha.
“Maxaa aad doonaysaa?” ayaa uu ninkii meesha lahaa u wayddiiyay si cadho ka muuqato. “Walaalkay oo Chicago ka yimi in aan la hadlayo miyaanad arkayn, muddo ismaanaan arag e?” ayaa uu ka daba keenay isaga oo aan sugin jawaabta cunugtii yarayd.
“Waa hagaag, aniguna walaalkay baan kaaga sheekayn,” ayay Tess u tidhi si iyada laftarkeedu cadho-cadho ka buuxdo. “Run ahaantii waa uu bukaa … aniguna waxaan rabaa in aan u iibiyo Mucjiso!”
“Yaa! bal ku soo celi!”
“Magaciisu waa Andrew, waa uu bukaa waxaana laga soo baxay madaxa gudihiisa. Aabbahayna waxa uu sheegay in keliyaata Mucjiso badbaadin karto. Markaa waxa aan rabaa in aan u iibiyo mucjisadaas e miyaad haysaa? Waana imisa?!”
“Annagu ma iibinno Mucjisooyinka, inantaay! Waa aan ka xumahay, kuma caawin karo.”
“I dhegayso, waa aan hayaa lacagtii aan ku iibsan lahaa Mucjisadaas. Haddii aad qawaddidna, waa aan kuu soo kordhin doonaa e fadlan ii sheeg qiimaheeda.”
Ninka ay walaalaha yihiin kan farmasiiga haystaa waa nin si qurux badan u lebbisan, [oo saw dusha kala socday wadahadalkooda]. Inta uu hoos u soo foorarsaday ayaa uu yartii yarayd wayddiiyay, “Mucjiso noocee ah buu walaalkaa u baahan yahay?”
“Ma garanayo, waxa aan keli ah ogahay i nuu xanuunsanayo Hooyana tidhi: qalliin buu u baahan yahay. Laakiin se aanu Aabbe haynin lacagtrii loo baahnaa si qalliinka lo fuliyo,” ayaa ay tidhi Tess iyada oo ay indhaheeda oohini ka soo taagan tahay.
“Imisa ayaa aad haysaa?”
“Hal doollar iyo kow-iyo-toban senti.”
“Alla maxaa isla doonasho dhacday!” ayaa uu ku dhoola caddeeyay ninkii. “Doollar iyo kow-iyo-toban senti? Waaba qiimihii u go’naa Mucjisooyinka walaalaha yaryar!”
Lacagtii ayaa uu ka qaaday kuna qabtay gacan, gacantii kalana intuu garabkeeda saaray ayaa uu ku yidhi, “Ii hoggaami dhankaa iyo xaafaddiinii iina gee waalidkaa, aan eego bal in aan hayo noocadda Mucjiso ee uu walaalkaa u baahan yahay e.”
Ninkan sida qurxoon u lebisnaa ee Chicago ka yimi wuxuu ahaa Dr. Carlton Armstrong oo ah khabiir dhanka qalliimada ah, kuna takhasusay qalliimada niyuuroonnada iyo wixii la xidhiidha ee la yidhaahdo ‘Neuro-surgery.’
Qalliinkii inankii yaraa ee Tess walaalkeed ahaa waa lagu sameeyay iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin, waqti badanna kuma ay qaadan in uu Andrew ku soo noqdo xaafaddii isagoo bedqaba. Hooyadii iyo Aabbihii waxa ay si farxadi weheliso uga sheekaysanayeen silsiladdii dhacdooyinka ahayd ee soo gaadhsiisay halkan.
‘Qalliinkaasi,’ ayaa ay Hooyadeed ku dhawaaqday si hoose. “Waxa uu ahaa Mucjiso run ah. Waxa aan iswayddiinayaa inta uu ku kici lahayd.”
Tess halkan ayay dhoola-caddaynaysaa. Waa ay ogtahay inta uu ku kacay qalliinkani. Hal dollar iyo kow-iyo-toban senti… oo lagu daray iimaanka ilmo yar.
Previous Xeerka ayay ku taallaa!
Next 15 Qarni ka hor!